Conda, PIP ary NPM: Rafitra fitantanana fonosana cross-platform | Avy amin'ny Linux
Araka ny efa fantatsika, maro na maro Linuxeros efa za-draharaha, ny Rafitra miasa GNU / Linux mazàna izy ireo dia manana karazana maro isan-karazany mandrafitra azy. Noho izany, afaka mankafy isika a fizarana miaraka amin'ny tontolo Desktop iray na maromaro, Manager Window, Boot Managers, Login Manager, Graphical Servers ary singa hafa, toy ny, "Mpitantana fonosana", ao anatin'izany dia misy ny sasany fantatra amin'ny anarana hoe "Apt-get" ary ny hafa tsy dia fantatra loatra, toy ny "Conda".
Eny, "Mpitantana fonosana", ireo rafitra izay tsy inona fa ny fanangonana fitaovana izay manompo automate ny fizotran'ny fametrahana, fanavaozana, fanaingoana ary fanesorana fonosana rindrambaiko ao amin'ny Rafitra miasa sy maimaim-poana. Na dia izany aza, ny sasany amin'izy ireo matetika dia tonga amin'ny endrika multiplatform, izany hoe ho an'ny rafitra miasa sy mihidy mihidy, toy ny Windows y MacOS.
Guix: Tutorial momba ny fametrahana fitaovana fitantanana fonosana
Noho izany, eo anelanelan'ny "Mpitantana fonosana", fantatra kokoa sy ampiasaina, azontsika lazaina apt-get, aptitude, apt, pacman, yum, ankoatry ny hafa, na dia ireo ihany aza sehatra tokanaizany hoe ireo GNU / Linux. Na izany aza, misy ihany koa ny antsoina Guix, izay mazàna tsy dia fantatra loatra, satria, amin'ny ankapobeny, tsy tafiditra afa-tsy izy ary amin'ny alalàn'ny default, ao amin'ny GNU Distro mitovy anarana. Ary izay noresahinay tamin'ny lahatsoratra teo aloha, izay amporisihanay hamaky rehefa vita ity publication ity.
Guix 1.2: Tutorial momba ny fametrahana fitaovana fitantanana fonosana
"Guix amin'ny maha mpitantana fonosana azy dia voasoratra amin'ny fiteny Guile Scheme ary mifototra amin'ny mpitantana fonosana Nix. Ary amin'ny maha fizarana GNU azy dia tsy misy afa-tsy singa maimaim-poana ary miaraka amin'ny kernel GNU Linux-Libre, nodiovina tamin'ny singa firmware tsy misy maimaim-poana."
Navoaka ny kinova azo antoka voalohany an'ny Guix 1.0 ary ireto ny vaovaony
1 Conda, PIP ary NPM: Rafitra fitantanana fonosana 3
1.1 Inona ny Conda?
1.1.1 Misimisy kokoa momba an'i Conda
1.2 Inona no atao hoe PIP?
1.2.1 Misimisy kokoa momba an'i Pip
1.3 Inona ny atao hoe NPM?
1.3.1 Misimisy kokoa momba ny NPM
Conda, PIP ary NPM: Rafitra fitantanana fonosana 3
Inona ny Conda?
Araka ny anao tranokala ofisialy, "Conda" es:
Misimisy kokoa momba an'i Conda
"Conda" manana tena tsara antontan-taratasy ofisialy, na dia miditra fotsiny aza anglisy. Na izany aza, manana vondrom-piarahamonina an-tserasera tsara antsoina izy io «Conda-forge», izay manome antontan-taratasy tena tsara sy Fonosana Conda ho an'ny rindrambaiko maro karazana. Ary farany, ao amin'ny azy Tranonkala GitHub Misy fampahalalana sarobidy kokoa azo jerena, ho fampidinana, fametrahana ary fampiasana.
Fitsinjarana Anaconda: Fitaovana feno indrindra momba ny siansa momba ny angona miaraka amin'i Python
Inona no atao hoe PIP?
Araka ny anao tranokala ofisialy, «PIP» es:
“Izy io izao no fitaovana natolotry ny PyPA hametrahana fonosana Python. Noho izany, ny PIP izao no mpanamboatra fonosana tiana kokoa ho an'ny Python, iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny fametrahana fonosana Python, ary vokatr'izany ilay mandefa miaraka amin'ny kinova maoderina Python. Ho fanampin'izany, manome endrika ilaina amin'ny fitadiavana, fisintomana ary fametrahana fonosana avy amin'ny PyPI sy ireo fonosana fonosana Python hafa izy io, ary azo ampidirina amina alàlan'ny fivezivezena marobe amin'ny alàlan'ny interface command line (CLI).. Ary satria loharano misokatra sy sehatra ifandraisana izy io, dia azo ampiasaina tsy misy olana koa avy amin'ny Windows sy MacOS."
Misimisy kokoa momba an'i Pip
«PIP» tena tsara koa io antontan-taratasy ofisialy, na dia miditra fotsiny aza anglisy. Na izany aza, manana vondrom-piarahamonina an-tserasera tena tsara ao «Python», izay manome tsara tahirin-kevitra. Ary farany, ao amin'ny azy Tranonkala GitHub Misy fampahalalana sarobidy kokoa azo jerena, ho fampidinana, fametrahana ary fampiasana.
Inona ny atao hoe NPM?
Araka ny anao tranokala ofisialy, "NPM" es:
"Mpitantana fonosana tsotra ho an'ny NodeJS izy, izay manamora ny fiaraha-miasa aminy, satria mamela anao hitantana tranombokim-boky misy ao anatin'ny fotoana fohy miaraka amina kaody iray monja, noho izany manampy amin'ny fitantanana modules, mizara fonosana ary manampy fiankinana amin'ny fomba tsotra . "
Misimisy kokoa momba ny NPM
"NPM" manana ny tsara koa izy io antontan-taratasy ofisialy, na dia miditra ihany koa izy anglisy. Na izany aza, manana vondrom-piarahamonina an-tserasera tena tsara ao «Node.JS», izay manome tsara tahirin-kevitra, ny sasany amin'izy ireo dia avy amin'ny Espaniola. Ary farany, ao amin'ny azy Tranonkala GitHub Misy fampahalalana sarobidy kokoa azo jerena, ho fampidinana, fametrahana ary fampiasana.
Farany, zava-dehibe izany ampio amin'ny «NPM» ny manaraka:
Ankoatr'izay, satria avy amin'ny loharanom-baovao misokatra sy sehatra hafa, azo ampiasaina tsy misy olana koa izy io Windows y MacOS.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Conda, PIP y NPM», izay ny 3 rafitra fitantanana fonosana cross-platform ary loharano misokatra, fantatry ny besinimaro sy ampiasain'ny mpampiasa mandroso sy ny mpamorona; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Conda, PIP ary NPM: Rafitra fitantanana fonosana cross-platform